China fire retardant tepi fekitori uye vagadziri Weicheng
Ichi chigadzirwa chakakodzera kudzivirira moto kwesimba uye tambo dzekutaurirana, zvinova zvakakosha mukubvisa njodzi dzakavanzika, kuve nechokwadi chekushanda kwese kwese kwekutenderera kwesimba uye mitsara yekuparadzira netambo dzekutaurirana. Yeyoga-inonamira tepi isina moto inogadzirwa nekambani yedu mhando nyowani yechigadzirwa chinodzima moto chesimba uye tambo dzekutaurirana. Iine zvakanakira moto-unodzora uye isingaite moto kuita, yekuzvinamatira uye kushanda. Iyo haina-chepfu, isina kunaka uye isina kusvibiswa mukushandisa, uye haina kukanganisa ikozvino kutakura kugona kwetambo mukushanda kwetambo. Nekuti iyo yega-inonamira tepi isina moto inoshandiswa kuputira pamusoro pekhebhu sheath, kana moto waitika, inogona kukurumidza kugadzira kabhoni yakasarudzika ine oxygen kuramba uye kupisa kupisa, izvo zvinonyatso kudzivirira iyo tambo kubva kupisa.
Chigadzirwa Chigadzirwa Moto unodzora tepi
Tsanangudzo Model 5 metres / mupumburu; 4cm yakafara / 6cm yakafara; 0.7mm gobvu
1. Kana tambo uye yekutaurisa tambo iri pamoto, iyo kabhoni dhayeti yeyakavharirwa yakanaka okisijeni inoumbwa kuchengetedza ronda tambo, kuitira kumisa kuwedzera uye kutsva kwemurazvo unodzora tambo
Kana paine moto mune yekunze nharaunda, iyo chena inonamira murazvo-inodzorera tepi inogona kuchengetedza tambo uye chiteshi mwenje kubva mukukuvara mune imwe nguva yenguva, uye kuve nechokwadi cheyakajairika mashandiro ekutapurirana uye ekutaurirana zviratidzo
3. Yega inonamira moto-chiratidzo tepi haina-chepfu, isina kunaka uye isina kusvibiswa mukugadzirwa uye kushandiswa. Nekuda kwekuzvinamatira kwayo, zviri nyore uye nekukurumidza kuti ishandiswe mukuvaka, uye haina kukanganisa nguva yekuvaka. Naizvozvo, iko kamwechete uye zvachose.
4. Iko kuvakwa kweyega-yekunamatira moto-chiratidzo tepi inonzwisisika, iyo iri pedyo yakabatana netambo netambo dzekutaurirana, uye haina mhedzisiro pane yazvino kutakura kugona kwetambo netambo dzekutaurirana.
5. Hunhu hukuru hweyako-inonamira-isina moto tepi hwakareba hupenyu hwebasa, uye hupenyu hwebasa reiyo crane inowirirana nekiyi yemagetsi nekutaurirana optical tambo. Muchokwadi, yakareba kupfuura iyo sevhisi yehupenyu yemagetsi kana kutaurirana optical cable. Mune yakasarudzika indoor mamiriro ekuchengetera, kuchengetedza kweanopfuura makore makumi matatu nemashanu hakuzooneka matambudziko emhando yepamusoro, anogona kushandiswa zvakajairika
6. Kukurukurirana pane wega anonamira moto-chiratidzo tepi GB 12666
5, ndiko kuti, inogona "kushandura" isiri yakashandiswa mafuta emagetsi emagetsi mukirasi yakakwira murazvo unodzora tambo
7. Iyo yekuzvinamatira isina moto tepi inogadzirisa dambudziko rakaoma mumunda wedziviriro yemoto tambo uye kudzora murazvo muChina. Moto wayo unodzora moto uye murazvo unodzora zvimiro zvakapfuura zvakanyanya zveavo vakajairika tambo-vanodzora machira. Iyo mhando yemurazvo-unodzora zvinhu zvemagetsi uye kutaurirana tambo dzemaziso dzisingakwanise kufananidzwa nemagetsi emagetsi anodzosera moto. Icho chitsva chinodzora moto zvinhu chekambo uye yekutaurirana mwenje
Pashure: Inorganic fireproof plugging zvinhu
Zvadaro: Moto unodzora bhegi